Fotoam-pahavaratra: poketra mena sa kitapom-bola manga? - Pisa Pelle Italiana Hoditra
Rehefa tonga ny andro mafana ary mihamahazo ny andro dia mihena ny loko mihena ary mamela toerana ho an'ny feo mamirapiratra sy mavitrika. Hahafinaritra azy ny hisintona ny felam-boninkazo, volon-doko marevaka sy famolavolana etno-chic amin'ny trano fidiovanao. Inona ny lokon'ny kitapom-bolanao amin'ny vanim-potoana vaovao?
Kavina kely, lehibe, soroka, crossbody, mateza, malefaka, ny kitapo amin'ity vanim-potoana ity dia mitsambikina avy eo am-baravarankely, izay misy endrika maro isan-karazany. Fa raha ny fitaovana hampiakanjoany dia fanalahidy ny loko hamoronana ireo akanjo tonga lafatra isaky ny fotoana. Misy safidy marobe, manomboka amin'ny loko pastel ka hatramin'ny fluorescent, avy amin'ny loko matevina hatrany amin'ny fanontana lehibe kokoa.
Ny mena sy ny manga dia loko izay misy habetsahana manaitra ao amin'ny palette. Ireo loko roa ireo, amin'ny alokaloka samihafa, dia manome aingam-panahy ny fahatsapana fitsangatsanganana sy ny fahafahana, ary manasa anao hankalaza ny fahatongavan'ny lohataona sy ny fahavaratra amin'ny angovo fanampiny.
Ny loko dia afaka miresaka betsaka momba ny toetran'ny olona iray. Matetika ny vehivavy izay tia ny manga loko dia voalanjalanja tena, mahalala tsara ny tenany sy ny toetrany: ireo izay misafidy akanjo manga sy kojakoja dia mahatoky, miorina amin'ny saina ary misaina ary lalina. Ny vehivavy izay tia ny loko mena dia tia tena, tia karokaroka ary manongotra: miantso ny maha-izy azy, ny toetrany ary ny toe-tsainy.
Amin'ny alàlan'ny fanamboarana ireo fitafiana aminao amin'ny alokaloka mena na manga dia mandefa hafatra mazava ho an'ny tontolo manodidina anao ianao. Azonao atao ny mampita ny maha-aina sy ny sainao amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny loko mety aminao indrindra. Afaka sahy manao loko marevaka sy marevaka ianao: ohatra, miaraka amin'ny poketra mena matevina na volomparasy mena matevina, hivoaka ao amin'ny vahoaka ianao ary azo antoka fa tsy ho voamarika.
Ny mena dia ny loko volon-doko, ny poketra mena tsara tarehy dia hahatsapa ho toy ny kintana tsy azo iadian-kevitra amin'ny hariva amin'ny namana. Ny loko dia manome angovo azo antoka ary mifanentana amin'izany dia tsy tsotra. Ny mena vibrant dia afaka mamirapiratra ireo alokaloka tsy miandany ary hipoaka miaraka amin'ny fifanarahana toy ny mainty na fotsy. Amin'ny akanjo vita amin'ny 50s miaraka amin'ny teboka polka fotsy sy mainty, ny felaka mena dia ny antsipiriany izay afaka mitondra fiovana. Mandritra ny alina iray amin'ny disco na amin'ny lanonana iray, ny poketra menao dia hahatonga ny fitafianao ho tsotra nefa kanto. Ny poketra mena mena dia afaka mampita hafahafa sy fomba, na mampifangaro azy amin'ny kiraro tsotra fotsiny aza.
Blue ny loko tena mora amboarina; manaitaitra ny halalin'ny halaliny sy ny hatsaran-tarehy ary ny fandanjalanjana tena izy. Azonao atao ny mampifangaro kitapo manga miaraka amin'ny aloky ny maitso, mavo, fotsy, volondavenona, volontany-paosy ary maro hafa. Ny manga dia marika matevina ary iray amin'ireo vitsy izay mamela ny lalao «tonal». Ny poketra manga dia kanto, na dia pataloha misy pataloha aza. Hararaoty ny iray misy endrika volavola na tropikaly, mamenoa tsara ny akanjonao. Ny poketra manga dia mety raha mitady namana isaky ny fotoana ianao, manomboka amin'ny endrika tsy ofisialy indrindra indrindra amin'ny tsy mahazatra. Mandehandeha eny an-dalambe amin'ny alina ianao, dia manangona rivotra mangatsiatsiaka ho an'ny fitafianao.
Previous lahatsoratraNext lahatsoratra
26 martsa 2021 tamin'ny 02:16 maraina
Misaotra betsaka. ? Como puedo iniciar sesion?
15 martsa 2021 tamin'ny 21:21 alina
15 martsa 2021 tamin'ny 01:09 maraina
14 martsa 2021 tamin'ny 09:02 maraina
Kitapo matevina Matilde ombyskin
Sokafy kitapo hoditra Tote
Kitapo kitapo vita kitapom-batana Greta
Ampiasao "10REG " Misy fihenam-bidy 10% hafa ho an'ny sarety iray manontolo nalefa tany aminao taty aoriana.
Ianareo ihany no handray ny fanararaotana